Rakkina Venzuweelaa: Guyyaan dhumaa seerri Peeruun viizaarratti baaste yeroo hafutti baqattoonni daangaa dhippisan - BBC News Afaan Oromoo
Rakkina Venzuweelaa: Guyyaan dhumaa seerri Peeruun viizaarratti baaste yeroo hafutti baqattoonni daangaa dhippisan
Lammiileen Veenzuweelaa kumaatamaan lakkaa'aman guyyaa seera cimaa baqattootaa Peeruu galuuf itti hojiirra olu jala bahuuf yaalaa jiru.
Sanbata alkan wallakkeessaa (05:00 GMT) eegalee, lammiileen Veenzuweelaa Peeruu galuuf paasportii fi viizaa qabaachu barbaachisa.
Ulaagaa haaraan kunis keessattu lammiilee Veenzuweelaa rakkina dinagdee biyyatti bara dheeraa baqataniif rakkoo uuma.
Akka Dhaabbata Gamtoomaniitti, bara 2015 qofatti lammiilee Veenzuweelaa miliyoon afuriituu baqate.
Dinadgeen biyyatti harkifataaniis hojii dhabiinsaa fi hirrina nyaataa fi qorichaa waan umeef, namoonni kumma dhiibbaan lakkaa'aman hirrina nyaataatiin rakkachaa jiraachusaaniitiin deeggarsa namoomaa barbaadu.
Lammiileen Venzuweelaa guyyaa dhumaa itti viizaan barbaachisuun dura Peeruu galuuf kan barbaachisu waraqaa eenyummaa qofaan.
Haaluma kannis lammiileen Veenzuwelaa kuma jaha karaa magaalaa daangaa Tumbeesiin Kamisa Peeruu galuu qondaaltoonni himaniiru.
'Marianni Luzardo' guyyaa Jimaataa ijoolleeshe lama waliin daangaa Kaaba Peeruu adeeaa turte. "Veenzuweelaatti paaspoortii argachuun baayyee rakkisaadha'' jechuun Associated Press tti himte. ''Kanaafuu dafnee Peeruu gahuu barbaadna.''
Pirezidaantiin Peeruu Maartiin Vizcaraa guyyaa Kamisaa uggura baqattootaa cimaa deegaranii ture.
''Biyyi keenya lammiilee Venzuweelaa kuma 800 oliif harkashee bante simattee jirti,'' jechuu gaazexessitootatti himaniiru. ''Kanaafuu amma visaa akka fidaniif gaachuun waanuma fudhatama qabuufi sirriidha enyu akka daangaa seene to'achuudhaaf.''
Dursaan paartii mormituu akka biyyaa hin baane dhorkame
Biyyoonni Laatiin Ameerikaas bakkattootaa fi koolugaltoota Veenzuwela irra caalaa simataniiru. Kolombiyaa Peeruutti kan namoota kuma 768 simatteetti aantee lammiilee gara miliyoona 1.3 simachuushee maddi Dhaabbata gamtomanii ni mul'isa.
Haalli Veenzuweelaa keessaa maal fakkaata?
Bulchiinsa motummaa Nikolaas Maaduro jalatti, dinadgeen kan kufe yoo ta'u, hirrinni nyaataafi qorichaa cimaa dhufeera.
Biyya qabeenyaa boba'aa qabdutti hirriinni boba'aan waan umameef konkolaachiftoonni boba'aa argachuuf guuyyootaaf hiriira qabachu qabu. Akkasumas irra deddebiin ibsaan ni bada.
Mootummaan ammoo hirriinni kan umamee sababii qoqophaa Ameerikaatiin jedhu.
Warri mormiitootaa garuu haalli biyyattii kun bu'aa bulchiinsa gaarii hintaanee fi malaamaltuummaatii jechuun motummaa qeequ.
Manni Murtii Veenzuweelaa dursaan paartii mormituu Huwaan Guwadiyoo akka biyyaa hin baane dhorke
Waraanni fi mormitoonni Sudaan waliigaltee mallatteessan
Saawwan waraqaa ragaa dhalootaa argachuuf